Umlando omfushane kaCamilo José Cela | Izincwadi Zamanje
UCamilo José Cela wayengumbhali waseSpain owazalwa ngo-1916 edolobheni laseCeruña lase U-Iria Flavia. UCela wayeseyunivesithi futhi empeleni waqala imisebenzi emibili efana neMedicine noMthetho, kepha nokho akazange aqede neyodwa yale misebenzi.
Yize waziwa ikakhulukazi nge novelas (ngaphezu kwamahlaya akhe amabi ...) ubephinde abe nesikhathi sokushicilela incwadi yezinkondlo eyayinezici ze-surrealist.
Umsebenzi wakhe ubonakale kakhulu empilweni yakhe yonke yombhali futhi nangemva kokushona kwakhe futhi kunokwehlukaniswa okuningi nemiklomelo ayiqoqayo, phakathi kwayo okumele sikhulume ngokungena kwakhe eRoyal Spanish Academy ngo-1957, iNational Award for Literature kusukela ngo-1984, INkosana yase-Asturias esuka kuma-87 kanye nesiphetho sangempela somklomelo Izincwadi zeNobel okunikezwe yona ngonyaka we-1989.
Njengokulangazelela singasho ukuthi umbhali wenza i-cameo kwifilimu ngenoveli yakhe Izinyosi nokuthi useke wavela ezinhlelweni ezahlukahlukene zethelevishini lapho ahlala khona eshiya iparele eliyinqaba njengamazwana asesiteji noma angenanhlonipho.
Ekugcineni uCela washona eMadrid ngonyaka 2002.
Isithombe - Hola
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Abalobi » Umlando kaCamilo José Cela
Lamahlaya azohlangana nezizukulwane zakhe zemibhalo. Angazi ukuthi ngubani lo obhale le biography kodwa uxuba amapheya nama-apula. Uma umuntu engazi ngemibhalo engabhali ngayo, ngicela.
UCamilo José Cela wayeyindoda enhle kakhulu, ehlakaniphe ngokwedlulele, futhi engomunye wababhali abakhulu iSpain ebinabo.